Xulka Qaranka Kubadda Cagta Oo Dadlka Ka Amba baxay Yaa Safray Yaase Laga tagay. (Sawiro)
Xulka qaranka kubaddda Soomaaliya ayaa maanta ka ambaxay garoonka diyaaradaha Aaden Cadde ee Magaalaa Muqdisho iyagoo kusii jeeda Magaalaa Adis- Ababa ee Dalka ethiopia oo ay ku ciyaari doonaan lugta hore ee isreeb reebka koobka aduunk sanadka 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka. Read More...
Madaxa XSCF oo ka warbixisey Shirweynihii & Ciyaarihii Caalamiga ahaa ee IAAF. Xiriirka Cayaaraha Fudud ee dalka waxaa uu ugu horeeyaa xiriirada dalka ee Calanka Soomaaliyeed badanaa geeya fagaarayaasha caalamka marka ay timaado ka qeybgalka tartamada ciyaaraha fudud iyo sidoo kale shirarka caalamiga ah.
Tartan cayaareed lagu soo gabagabeeyey waqooyiga London. Tartan kubadda cagta ahaa oo ay ku loolameen sideed kooxood oo ka mid ah kooxaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaaladan London looguna tala galay dhainyarada reer London xiliga fasaxa dugsiyada waxbarashada ayaa dhamaadkii usbuucii tagay lagu soo gabagabeeyey garoonka White Hart Lane ee waqooyiga London. Read More...
Xiddigtii hore ee kubada koleyga Soomaaliya iminkana ah guddoomiye ku xigeenka dhanka farsamada iyo xiriirka caalamiga ah ee xiriirka kubada koleyga Soomaaliya, loona yaqaano [Somali basketball’s Iron Lady], Drs Xaawo Sheeikh Ahmed (Xaawo Taako) ayaa madaxda xiriirka kubada koleyga aduunka ee FIBA kala hadashay sidii taageero gaar ahaaneed loo siin lahaa horumarinta kubada koleyga dalka Soomaaliya, maadaama dalku kasoo kabsanayao dagaalo muddo dheer jiray. Read More...
Xulka Qaranka ciyaaraha Fudud oo Ka qayb galaya Ciyaaraha All African Game+Sawirro
Ciyaartoyda Xulka qaranka ciyaaraha fudud ayaa maanta ka garoonka diyaaradaha Aaden Cadde iyaoo kusii jeeda dalka Congo oo ay uga qeyb galayaan ciyaaraha All Afriacn Games 2015, waxaanawafdiga hogaaminaya wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinayarda iyo isboortiag Cusmaan Aadan Dhuubow. Read More...
Koob lagu xusayey halyey Faarax Sindiko oo ka dhacay London. (Sawiro) Tartan kubadda cagta ahaa ayna ku loolamayeen cayaartoydii cuslaatay eek u dhaqan magaalada London ee cariga Ingiriiska lagu xusuusanayey aabihii cayaaraha dalka Faarax wehliye Caddow (Sendico) ayaa shalay lagu qabtay xaafadda Streatham ee koonfur-Galbeed London.
Xiriirka Kubadda Gacanta oo Ganaax Culus dul DHigay kooxda I.L.S
Madaxda Xiriirka kubadda Gacanta oo kulan ay go’aan uga gaarayaan kooxda I.L.S ku yeeeshay xafiiskooda Muqdisho waxayna go’aamiyay in kooxda I.L.S laga saaro tartanka kubadda Gacanta ee Wiilasha iyaga oo sidoo kale dib ugala laabtay aqoonsigii kooxnimo ee xiriirka kubadda Gacanta.
Degmada Waaberi oo usoo baxday Fiinaalka Tartanka Degmooyinka
Degmada Waaberi ayaa usoo gudubtay Finalka tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir kadib markii ay guul ka gaartay Degmada Wadajir.
Pedro oo dib u soo celiyey rajadii Chelsea guul iyo goolna ku bilaabay horyaalka Ingiriiska.
Kooxda Chelsea iyo cayaaryahankooda cusub ee ay dhawaantan kala soo wareegeen kooxda Barcelona ayaa manta guul ka gaaray kulankii ay kooxda West Brom kaga hortageen kaasoo ay guushi Chelsea ku raacday 2-3.
Usain Bolt oo ku guulaystay orodkiii la wada sugayey ee 100m dunida. Orodyahanka reer Jamaica ee Usain Bolt ayaa daqiiqado ka hor ku guulaystay orodkii sida aadka looga dhursugayey ee 100m adduunka tartanka cayaaraha fudud ee dunida oo ka socda magaalada Beijing ee dalka Shiinaha.
Page 7 of 16First Previous 2 3 4 5 6  8 9 10 11 Next Last Search Articles...